फेरि चौधौं चरणको अनसनमा डा. केसी, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लड्ने संकल्प | newdnn.com
फेरि चौधौं चरणको अनसनमा डा. केसी, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लड्ने संकल्प
२४,सोमबार १२:५८ Sangita Rai
काठमाडौ,२४ पुस । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले चौधौं चरणको अनसन सुरु गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बर्खास्त गरेका चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएमका डिन शशि शर्मालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको भन्दै डा. केसीले अनशन सुरु गरेका हुन् ।
केसीले राजधानीको महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशन सुरु गरेका छन् । शर्मालाई कानून विपरीत बर्खास्त गरिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्न हिजो आदेश दिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले चारवर्षे पदावधि सकिन चार दिनअघि हिजो शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि डा. केसी, प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै अनशन बस्नु भएको हो ।
डा. केसीले विज्ञप्ति मार्फत न्यायालयलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको आरोप लगाएका छन् । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुन नसकेको भन्दै उहाँले तत्काल आयोग गठन गर्न सरकार समक्ष माग गरे । आईओएममा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गनुपर्ने डा. केसीको भनाई छ ।